2009 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာငွေ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 678.0714 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်နေ့မှာ အမြင့်ဆုံး 723 ကျပ် ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 17 ရက်နေ့မှာ အနိမ့်ဆုံး 635 ကျပ် ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
2009 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုံး တစ်လလုံး ပျမ်းမျှ 1.517579 ပေါက်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ 27 ရက်နေ့မှာ အမြင့်ဆုံး 1.5468 ထိ ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ အနိမ့်ဆုံး 1.49247 ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အားထုတ်ပြီး လုပ်တတ်တယ်နော။်အားကုန်လိမ့်မယ်။ ပျားအုံ့ကို စားပါ
အားကုန်ရင် ပျားအုံကို.... တုတ်နဲ့ ထိုးပါ... မဟုတ်လို့ တော်သေးတာပေါ့ ...
Thank you so much for your currency view. Please continue for next month.